Ciidamada AMISOM oo Qarax lagula eegtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaraxaan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka Ex-kontorool Balcad ee Wadada Warshadaha gobolkan Banaadir,waxaana sida lasheegay lala eegtay Ciidamoka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Dad aan lahadalnay ayaa Risaala waxa ay u sheegeen in Miinada nooca dhulka lagu aaso ah lala eegtay kolonyo ka tirsan Ciidamada AMISOM oo wadada ku socdaalayay,isla markaana ay maqlayeen jugta qaraxa.
Sidoo kale wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in qaraxa kadib ciidamada AMISOM ay rideen rasaas farabadan,hayeeshee waxaa weli la ogeyn khasaaraha qaraxa Ciidamada AMISOM kasoo gaaray iyo in ay dad rayid ah wax ku noqdeen rasaastii ay fureen.
Waxaa haatan hakad ku jira isku-socodka dadka iyo Gaadiidka ee Wadada Warshadaha gaar ahaan agagaarka Ex-koontorool Balcad oo kolonyo ka tirsan Ciidamada AMISOM qarax lagu laeegtay.